Hangzhou Jiande Enterprise na-akpọghachi ngwa ngwa karịa ndị ọrụ 100, ma gbue ụgwọ ọrụ ha okpukpu atọ iji gbaa ume oge gbasaa iji mee ihe mkpuchi! Site na ntiwapụ nke oyi baa coronavirus ọhụrụ na Wuhan, mmepụta na ibute ihe nkpuchi aghọwo isiokwu nke nchegbu ọha na eze. Dị ka a na-eduga enterprise na t ...
N'ehihie nke Jenụwarị 27th, Zhou Jiangyong, onye otu so na Kọmitii Kwụsị nke Kọmitii Mpaghara Ọchịchị na odeakwụkwọ nke Kọmitii Kọmitii nke Hangzhou, gara Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. (onye na-emepụta ngwaahịa nchekwa ọrịa na-efe efe) iji nyochaa. O kwusiri ike na m ...
Ka ọ dị ugbu a, ọgụ mba na-alụso oyi baa nke ọhụụ coronavirus bidoro. Dị ka "usoro nchebe mbụ" maka nchebe ọcha nke onwe, ọ dị ezigbo mkpa iyi ihe nkpuchi na-agbaso ụkpụrụ mgbochi ọrịa. Site N95, KN95 na ọgwụ ịwa ahụ masks, nkịtị p ...